Toroid binda ngesiseko
Uncedo lokutswina kwetoroid zibalasele ngakumbi, ezinje ngokugcwala okungcono okuthambileyo, ilahleko engabalulekanga, uzinzo lobushushu kunye neendleko eziphantsi. I-inductor ene-Fe Si Al yemagneti yomgubo osisiseko inokuphelisa ukungalunganga okubangelwe ngumsantsa womoya weringi yentsimbi.
Intonga yeCore Core
Ngentonga engundoqo yokutshixwa, owona msebenzi ubalulekileyo ngowokuba Umqondiso we-AC ingayi Isihluziweyo okanye i-resonant nge-resistor kunye cummeli.
Radial Ekhokelwe Wire Inxeba Inductor
I-inductor emile okwe-I yinto ye-elektroniki yokungenisa eyakhiwe ngesakhelo esisisiseko se-I esimile kunye nocingo lobhedu. Licandelo elinokuthi liguqule imiqondiso yombane ibe yimagnethi. I-inductor ezimilise ngokwazo yi-inductor. Amathambo e-inductor amilise i-I axhaswe ngokubhijela i-coil yentsimbi yobhedu. I-inductance emile okwe-I yenye yeempawu zesekethe zombane okanye izixhobo.
I-PFC inductor, ekwabizwa ngokuba yi-toroidal inductor, Iyakwazi ukuphatha imeko ephezulu kakhulu ye-DC yangoku kunye nokucinywa okuncinci.
“Ukulungiswa kweFactor yamandla” Into yamandla ngumlinganiselo wamandla asebenzayo ohlulelwe ukusetyenziswa kwamandla ngokupheleleyo (amandla abonakalayo).
Inductor toroidal inductor
Ukuthumela amandla e-toroidal inductor yamandla, olona ncedo luphambili yile: isiseko somgubo wentsimbi, i-silicon efanelekileyo yokujikeleza kweempawu zentsimbi, kunye neendleko ziphakathi kwesiseko somgubo wentsimbi kunye ne-iron nickel molybdenum (MPP)
I-inductor yamandla e-SMT
Olu hlobo lwe-SMT lwamandla ombane lusetyenziswa ngokubanzi kwi-LED, iimveliso zedijithali, ukuqhuba kwe-LED.
WUyilo oluvulekileyo olungakhuselwanga, lunalo Ukunyamezelana okuphantsi kumaxabiso aphezulu okuziphatha, Ubungakanani buncinci.
I-SMD yokukhusela amandla
I-inductor ekhuselekileyo yamandla ombane luhlobo lokuphazamiseka kumhlaba wamagnetic. Ukusetyenziswa kwesigqubuthelo esihle semagnethi ukufezekisa ukukhusela i-electromagnetic akunakuthintela kuphela ukuphazamiseka kwensimbi ye-electromagnetic field, kodwa kunye nomlinganiselo wokukhusela ongaphazamisi ukusebenza kwamanye amacandelo omda.
I-inductor yamandla e-SMD
Umphezulu wamandla okonyusa amandla ezicelo ezisusela kunikezelo lwamandla ukuya kuguqulelo lwamandla. Iindidi ezingundoqo zibandakanya i-ferrite kunye ne-powder ecinezelweyo ene-topologies kubandakanya: ukungakhuseli, ukukhusela, ukucofa umgubo wentsimbi, i-ferrite camera, kunye ne-wirewound chip inductors.
Ngesiseko sokulahleka esiphantsi kunye nobungakanani be-compact, ilungele ukucinezelwa kwengxolo, isihluzo se-EMI, sikulungele ngokupheleleyo ukutshintshela abalawuli.
I-SMD yokudibanisa amandla
UMing Da ngumenzi wobuchule we-SMD inductor yamandla (ekhuselweyo / engafakwanga izixhobo). Amandla ombane abaluleke kakhulu kwizicelo apho uguquko lwevolthi luyimfuneko kuba bavelisa ilahleko esezantsi. Ngamanye amaxesha amandla ombane asebenzayo aya kusetyenziswa ekugcineni amandla. I-Inductor yamandla igcina uzinzo lwangoku kwisekethe yombane enangoku eyahlukileyo.
Radial Shield amandla inductor
Kuba ikhuselwe iphiramidi ebonisa amandla ombane inductor, ilungile njengekhoyili yokuchamela ukucoca ingxolo, Nge-Rdc esezantsi, uhlobo olukhulu lwangoku, kungcono kumgca wokuhambisa umbane.
Ukubumba okungafaniyo kunokuvulelwa wena ngesicelo sakho sobungakanani.
I-Toroidal inductors zizinto ezingenzi nto ezibonisa i-coil yentsimbi okanye i-enameled enenxeba yocingo kwifom emilise nge-ferrite okanye ngentsimbi eyimpuphu. Isebenziseka kwaye ithembekile, ii-toroids zisetyenziselwa uyilo lwesekethe ephantsi efuna ukungeniswa okukhulu. Zisetyenziswa ngokubanzi kunyango, kwimizi-mveliso, kwinyukliya, kwiimveliso zeaudio, kumqhubi we-LED kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo,kunye nezinye izicelo ze-elektroniki. Ukuba uyilo lwesekethe yakho lufuna umgangatho we-toroidal inductor, zifumane kubavelisi abakhokelayo, kwi-future Electronics.
Ukuhamba okuphezulu kwesixhobo se-toroidal inductor
I-toroidal coil inductance yeyona nto ifanelekileyo kwithiyori yokungenisa. Inesekethe evaliweyo evaliweyo kunye neengxaki ezimbalwa ze-EMI. Isebenzisa ngokupheleleyo isekethe yamagnetic kwaye kulula ukuyibala. Inezinto eziphantse ukubakho kwithiyori. Konke kubandakanya i-toroidal coil induction. Nangona kunjalo, kukho enye ingxaki enkulu. , Akukho lula ukukrwela umsonto, kwaye inkqubo iphathwa ikakhulu ngesandla.